Ukuvela kwe-Cadastre yeenjongo ezininzi zophuhliso oluzinzileyo kwiLatin America-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2018 cadastre
Esi sihloko seNkomfa eya kubanjelwa eBototá, eColombia, imihla ye-2 kwi-26 kaNovemba ka-2018, ehlelwe nguMbutho waseColombia wamaCadastral Engineers kunye ne-Geodests ACICG.
Isindululo esinomdla, apho kwenziwe iinzame ezinkulu zokudibanisa izithethi zesizwe nezamazwe aphesheya ezivela kumaziko, emfundo nakumacandelo abucala malunga neCadastre; Ngokuqinisekileyo omnye wemiceli mngeni iya kuba kukufezekiswa kwesishwankathelo kunye nokusetyenziswa kolwazi olunikiweyo. Nangona igama lesemina linomdla wokukhangela umbono weLatin America, le semina ifika kwindawo ebalulekileyo kweli lizwe litropikhi elihlangabezana nefiva yokuphuculwa kolawulo lomhlaba ngengozi yeeprojekthi zentsebenziswano ezahlukeneyo, amanyathelo okufunda, iinkampani zabucala kunye nomceli mngeni wokugcina intsalela ngenxa yobuchwephesha bobuchwephesha kunye nokugcina ulawulo lwommandla kwinjongo yawo yokuqala: ukwenza iinkonzo ezingcono kubemi.
Yakha isikhala sokuthatha inxaxheba kunye nokusebenzisana kwabaqeqeshi kunye nabantu abadibeneyo kwimicimbi ye-cadastre eninzi, eyenza ukuvandlakanywa kwamandla, kunye nokuphunyezwa kobuchwepheshe obutsha ekufumaneni ulwazi oluza kubandakanywa kwiinkqubo ezidibanisa kunye nokulawula idatha ukusuka kwi-cadastre eninzi.
Ukuqinisa iinkqubo zezemfundo nokudala indawo yokuthatha inxaxheba kunye nokuveliswa kwelizwe kunye nakwamanye amazwe ootitshala abaqhagamshelwe kwiinkqubo zokulawulwa kwempahla kunye nepropati.
I-ajenda yesiLwesibini i-23 ka-Oktobha.
Ing. UJosé Luis Valencia Rojas - uMongameli we-ACICG
UWilliam F. Castrillón C. - I-Deputy Deputy Chancellor UDFJC
Ing. U-Eduardo Contreras R. Unobhala Wezendalo-Urhulumente waseCundinamarca
Arq. Andrés Ortiz Gómez weSithili soLungiselelo
UCesar A. Carrillo V. Unobhala Wocwangciso Urhulumente waseCundinamarca
Idatha okanye iziseko zophuhliso? -Uya kuqala phi iprojekthi yecadastral.
Ignacio Duran Boo - eSpain
Umbono weCadastre kunye nokuhlanganiswa kobhaliso kunye nendlela yokusebenza.
IGolgi Alvarez -Honduras -Fabian Mejía -Colombia
Ukusetyenziswa kweBlockchain ekwandiseni amaxwebhu asemthethweni eHaarlem-Holland.
UJan Koers - ENetherlands
Ukuhlanganiswa kolwazi lweConomionicic Planning kunye indawo yaseBototá.
U-Antonio José Avendaño - EColombia.
Ukusetyenziswa kolwazi oluvela kwi-Superintendence I-Notarial kunye neRegistry: Ukuzenzekelayo kotshintsho lwamagama, ii-englobes kunye ne-desenglobes.
UOlga Lucia López- Colombia
Kulo lawulo lwelizwe usebenzisa iimephu kunye nezicelo ezidibanisa i-cadastre kunye noluntu ngokusebenzisa i-ArcGis
Thelekisa iimetrikhi ezisetyenziswa kumazwe apho i-IDB iphuhlise indlela ye-cadastre yeendlela ezininzi (imeko yaseBolivia).
USandra Patricia Méndez López-Colombia
I-Agasti ye-23 ka-Oktobha
Ubungcali ngokwemilinganiselo yokuhlaziywa kwama-cadastral.
UManuel Alcázar - eSpain
I-cadastre kunye nokhuseleko olusemthethweni kubunini mhlaba njengemfuneko yophuhliso lwamaphandle.
UFelipe Fonseca - EColombia
Umbono kunye nendima yecandelo labucala kwiCadastre leMhlaba.
UCarlos Niño - EColombia
Ukomeleza iimali zoluntu kunye nophuhliso lweprojekthi, ngezixhobo zolawulo lomhlaba.
UJosé Insuasti - EColombia
Impembelelo yokwabela abaphantsi amagunya kulondolozo lweenkcukacha ze-cadastral kunye nokunxibelelana kwayo nezifundo.
UDante Salvini - eSwitzerland
Ukusebenzisana kwedatha ngokuphunyezwa kwemodeli ye-LADM-COL ye-cadastre yeenjongo ezininzi.
USergio Ramírez kunye noGermanán Carrillo - Colombia
I-GNSS spatial geodey, uphuhliso oluzinzileyo kunye neenjongo ezininzi ze-cadastre eColombia: impumelelo kunye nemiceli mngeni.
U-Héctor Mora - e-Colombia
Iinjongo ezininzi zeCadastre yaseQuebec (Canada): Indima ebalulekileyo yomyalelo wobungcali.
Orlando Rodríguez - eCanada
Iinjongo ezininzi zeCadastre: Isiseko sokusekwa ngokusesikweni kwepropathi yasemaphandleni.
Yovanny Martínez - EColombia
Idayari yoLwesine i-24 ka-Oktobha.
Imephu yentsebenzo yentlalo-engqongileyo yee-hydrocarbons.
UCarlos Ernesto García Ruiz - Colombia
Izinto eziluncedo ze-cadastre elungileyo, yolawulo lomhlaba kwicandelo le-hydrocarbon.
UJorge Delgado - EColombia
Iimodeli ezandisiweyo zisuka kwi-LADM njengesixhobo sokucwangcisela ukusetyenziswa komhlaba.
I-Moises Poyatos -Spain kunye no-Alejandro Tellez - Colombia
Indima entsha yeNjineli yeCadastral kutshintsho lwemodeli ye-cadastral. Ukusuka kwi-orthodox ukuya kwiinjongo ezininzi.
UDiego Erba - eArgentina
Iimodeli zokulinganisa zoqikelelo lwamaxabiso olungenelelo ngoncedo loluntu.
U-Everton Da Silva - eBrazil
Umsebenzi kunye noMbono woBunjineli beCadastral kwiNkqubo yeCadastre yeNkqubo ezininzi (Umthetho 1753/15).
UOscar Fernando Torres C. - EColombia
Iimodeli ezisekwe kwiarhente ye-cadastre ye-multipurpose-Cadastre 5D.
Edwin R. Pérez C. - EColombia
Inkqubela kunye nemingeni ekuphunyezweni komgaqo-cadastre ezininzi
UOscar Gil -Kolombia
I-cadastre eyahlukeneyo eColombia: Umbono ovela kwiGunya leCadastral-Agustín Codazzi Geographical Institute.
UOscar Ernesto Zarama - EColombia
Cadastre eColombia: Ixesha elidlulileyo, elikhoyo kunye ... elizayo?
UJosé Luis Valencia Rojas - EColombia
Iqela lomdaniso leDyunivesithi yaseSithili «uFrancisco José de Caldas»
Ngamafutshane, le misitho ingxamiseke ngakumbi ukudala indawo yokuboniswa kunye nokulungelelaniswa kwamanyathelo aqinisekileyo ukuba wonke umntu uphethe ezona njongo zakhe kodwa ngokwenza oko akukho lula ukuzenza ngendlela efanelekileyo ngexesha kunye nokusebenza kakuhle. Kwaye nangona ingesosibophelelo sabaququzeleli bemisitho, ngenxa yomdla oku oku kuwubonisayo kwamanye amazwe kwimeko-ngezizathu zokusebenza ngempumelelo komzamo owenziweyo- ukuba, ngaphandle kokubonelelwa kwemixholo, kunokwenzeka ukuba ubhale imiba egqibeleleyo kwaye izithuba apho kunokubakho umsonto wokuqhubeka kokusetyenziswa kwazo ekuthathweni kwezigqibo, iya kuba yeyona nto ilungileyo isemina enokufaka ngayo.
Ikomkhulu liza kuba kuRhulumente waseCundinamarca, eAntonio Nariño Auditorium eCalle 26 # 51-53. IBogota eColombia. Apha iwebhusayithi yesiganeko.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Bentley Systems yenza ibhetti eqinile kwi-GIS xa ithola i-Arhente9
Post Next Abaphumeleleyo bamabhaso e-annual for Innovation kwiZiboneleloOkulandelayo »